Ọsọ | October 2021
Isi > Ọsọ
ultegra di2 nwelite ngwa ngwa 11 ọsọ
Ultegra di2 nwelite ngwa ngwa 11 ọsọ - nzaghachi maka okwu a
Nwere ike nweta nkwalite ultegra ka Di2? Ewezuga usoro DURA-ACE 7970 Di2 Shimano dị ezigbo mma n'ihe banyere ịlaghachi azụ. Nke a pụtara na ọ dị nfe ịkwalite igwe kwụ ọtọ Ultegra 6770 10 ọsọ ọsọ gaa na 11 ọsọ Di2. Ihe kachasị mkpa ị chọrọ bụ derailleurs ọhụrụ abụọ. Ọ bụ ya.
mgbatị ụkwụ ọsọ
Speedgba ọsọ ọsọ ụkwụ - otu esi ekpebi
Omume ndị dị a improveaa na-eme ka ọsọ ọsọ ọsọ? Ninggba ọsọ na-arụ ọrụ iji wuo SpeedInterval Runs. Oge nkwụsị dị ka mgbatị HIIT: ị na-arụ ọrụ dị elu n'oge dị mkpirikpi, gbakee, ma mee ya ọzọ. Ugochukwu Ogologo, Ji nwayọ Na-agba ọsọ. Omume Ike Legkwụ iji meziwanye Ọsọ. Sled Push. Ugwu Ladder. Akwa Akpụkpọ ụkwụ. Ntụpọ ntụpọ.
otu ọsọ mtb etiti
Single ọsọ mtb etiti - olee otu esi edozi
Nwere ike ịme igwe kwụ otu ebe na ọsọ otu ọsọ? Anyị na-ejikwa ụkwụ igwe ochie igwe ochie. Enwere ike ịzụta otu ọsọ ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ịnwere ụdị ụkwụ azụ. Maka ebe anyị na-akwụghị ụgwọ anyị zụtara otu ngwa ngwa ntụgharị. Ngwunye ahụ gụnyere sprocket, ọtụtụ spacers, na mgbachi mkpọchi.
plyometrics maka ọsọ na mgbawa
Plyometrics maka ọsọ na mgbawa - ihe ngwọta
Ndi plyometrics na-abawanye ọsọ? Achọpụta Plyometrics, nke bụ mmegharị ebe ị na-awụba elu na-agbawa agbawa ma nọrọ obere oge na ala dị ka o kwere mee, achọpụtara iji melite ọsọ ọsọ na arụmọrụ. 12.09.2017
seramiiki ọsọ yinye
Ogwe ọsọ ọsọ nke seramiiki - otu esi edozi ya
Kedu ka ọsọ seramiiki si arụ ọrụ? Yabụ kedu ka esi arụ ọrụ? Akwagharị na-eji nhazi Pinion abụọ na Pinion ihu n'ihu na Pinion azụ gbawara agbawa nke na-edozi ngbanwe gia. CeramicSpeed ​​na-ekwu na nke a na-emepụta mgbanwe na-enweghị ntụpọ na mgbanwe na-agbanwe nke nwere ike ịkarị ọfụma ụgbọ elu eletrik.
Tri bike vs road bike ọsọ
Tri bike vs road bike speed - esi edozi
Bike nwere igwe kwụ otu ebe na-agba ọsọ ọsọ karịa igwe kwụ otu ebe? Ezubere igwe kwụ otu ebe Triathlon iji mee ka ndị na-agba ịnyịnya ọsọ ọsọ. Oche oche dị nso na vetikal karịa nke igwe kwụ otu ebe. Geometry a dị larịị na-etinye úkwù onye na-agba ya n'elu crankset nke na-etinye quadriceps ha ọzọ maka ikewanyewanye. Bikgbọala atọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agba ọsọ karịa igwe kwụ otu ebe.